यि कारणहरुले चर्चामा छ लम्फु ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > यि कारणहरुले चर्चामा छ लम्फु !
यि कारणहरुले चर्चामा छ लम्फु !
बैशाख २८ गते सुक्रबारबाट अल नेपाल प्रर्दशन हुन लागेको चलचित्र लम्फु बिभिन्न कारणले चर्चामा छ ।
कुसुम श्रेष्ठ (तरकारीवाली)ले अभिनय गर्ने भनेपछि छायांकन हुनु पहिले देखी नै चर्चामा रहेको लम्फु यतिबेला टे«लर र गितको कारणले पनि चर्चा केही बढाएको पाईएको छ ।
बेरोजगार युवाहरुको कथालाई समेटेर निर्माण भएको लम्फुलाई एक नेपाली मौलीक चलचित्रको रुपमा पनि हेरीएको छ ।
त्यसो त बिगतमा चलचित्र किन लाग्छ मायाँबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो छबि बनाएका निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई पपुलर मल्टिमिडियाको ब्यानरमा शक्ती बल्लब घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् । यो टिमलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रले थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने टिमको रुपमा लिने गर्दछ ।
प्रर्दशन हुन केही दिन बाँकी रहँदा निर्माण पक्षले चलचित्रको जाँचपास पनि गराएको छ । लम्फुलाई केन्द्रिय चलचित्र जाँचपास समितिले कुनै पनि दृश्य नकाटीकन सबै उमेर समुहका विश्व भरीका दर्शकले हेर्न मिल्ने गरि युनिर्भसल प्रमाणपत्र दिएको छ ।
लम्फुबाट अभिनयमा कबिर खड्काले डेब्यु गरेका छन्, भने सलोन बस्नेत,मरिस्का पोख्रेल, चाँदनी शर्मा,कुसुम श्रेष्ठ (तरकारीवाली)आयान खड्का,कुसाग्र भट्राई,सञ्जीत भण्डारी,अजित लामिछाने लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।